Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị nye nwanyị dị afọ 40 ịnọ n'alụghị di na ịmụ nwa? - AHUIKE tinye MAG - TELES Relay
Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị nye nwanyị dị afọ 40 ịnọ n'alụghị di na ịmụ nwa? - AHUIKE tinye MAG
Otu nwanyị nwere ihe dị ka mmadụ iri atọ amalitelarị ịnụ oge elekere na-akụ, ọbụnadị ndị nwere obi ebere na ya. Ndị nke abụọ na-ajụ maka ndụ ịhụnanya ha ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ pụtara ịbụ ndị na-etinye aka na ya site na ịkwanye ikike "enweghị obi ụtọ" izute ndị mmadụ iji nwee ike dabaa na ụkpụrụ nke ha maara.
Otu nwanyị naanị ya na-echegbu onwe ya
Mgbe afọ 20 gasịrị, ajụjụ amalitelarị igwu egwu. "Ya mere, olee mgbe ị ga-achọta ịhụnanya?" "Have nwere onye maka ụbọchị ịhụnanya?" "Kedu mgbe ị na-akpọ anyị oku maka agbamakwụkwọ?" "N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​nwere ihe niile ị ga - eme masịrị" bụ okwu niile a ga - ahụta dị ka ihe ihere nye otu nwa agbọghọ. Ọbụna n'oge nwata, katuunu na-akụnye echiche bụ na Prince Charming bụ nwoke kwesịrị ntụkwasị obi nke ga-abịa ịzọpụta nwanyị nwere naanị otu echiche: ịchọta ịhụnanya. Ọ bụrụ na nwanyị mechie mmekọrịta, ọchịchọ ya maka obi ụtọ turnkey agwụbeghị. Mgbe ahụ ọ ga-agbanwe ịgbanwe ọnọdụ alụmdi na nwunye ya na nwoke dị oke njọ. N'oge ahụ, nzọụkwụ ọzọ na-abịa iji mezuo akara aka nke nwanyị: inwe nwa. N’amaghi ama ebum n’uche gị, ndị hụrụ gị ka ị “na-egbu oge” ịtụrụ ime ga-eme ka o doo gị anya, na-achọsi ike ka ị bie ndụ ezinụlọ. Ọ bụrụ na nke a bụ mgbe ụfọdụ, ọ bụ n'ihi na ọ bụ ihe gbasara ụjọ edenyere na mkpokọta amaghị ihe ọ bụla. Ole na ole ụmụ nwanyị na-anọ naanị ha na ndị nwere obi ụtọ na-anọchi anya ya, ndị na-eme nhọrọ a ma ọ bụ na -emekarị ka "ụmụ odibo ochie", ndị a na-ewepụ aha ha bụ ndị ọtụtụ na-achọ asịrị. Dika umu nwanyi nwere ike karia ime nhoputa kwa ubochi, ọ ka dị obere na a na-ajụ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye gbasara ịchọ ịhụnanya. Nke ka mma, a na-ahụ bachelor siri ike dị ka Dom Juan nke ọtụtụ na-enwere anyaụfụ. Kpa oke agbụrụ na-adịgide n'oge ụmụ nwanyị na-achọkwa imezu na ndụ ọkachamara.
Ọkachamara na-ekpughe nwanyị na-alụghị di na-enweghị nwa nwere obi ụtọ
Ndị ọrụ ibe anyị jụrụ ajụjụ si Guardian, Paul Dolan, prọfesọ sayensị omume na London School of Economics elebara anya ogologo oge na ajụjụ gbasara obi ụtọ. Ya mere, o na-agbaji olu nke echiche ọdịnala nke mmezu, ya bụ na di na nwunye-di na nwunye-ụmụaka ụgbọ okporo ígwè. Ọ na-akọwa na ụmụ nwanyị lụrụ di na-asị na obi na-adị ha ụtọ naanị mgbe di ha nọ nso. O kwuru, sị: “Ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye ha anọghị, obi na-agbawa ha obi. Ọ na-agbakwụnye na ụlọ ọrụ a na-erite uru naanị maka ụmụ nwoke ebe ọ na-eme ka obi jụrụ ha. "Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, enyena nsogbu" ọ na-achị ọchị. Ọ bụrụ na ụmụ nwoke lụrụ di na nwunye enwee obi ụtọ na alụmdi na nwunye, ọ bụ n’ihi na ọ na-enye ha nchekwa, nchekwa ego na ogologo ndụ. N'aka nke ọzọ, ndị mmekọ ha ga-anwụ ngwa ngwa karịa ndị otu nwoke na nwoke. Ndị na-etolite etolite na-adịkarị mfe inwe nsogbu ọgụgụ isi karịa ndị nke ikpeazụ. Naanị otu nkwubi okwu mgbe ahụ: nwanyị tozuru okè nke na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye emebeghị ụdị ndụ a “adịghị mma”. Ọkachamara n'omume mmadụ bụ nke doro anya. “See hụrụ otu nwanyị dị afọ 40 na-alụbeghị nwanyị nke na-enweghị nwa. Say na-asị onwe gị: ọ bụ ihe ihere, ọ bụghị ya? Ikekwe otu ụbọchị ọ ga-ezute nwoke zuru oke ma nke ahụ ga-agbanwe. Ee e, ma eleghị anya ọ ga-ezute onye na-ezighi ezi na nke ahụ ga-agbanwe. Ikekwe ọ ga - ahụ otu nwoke nke na - eme ya obi ụtọ na ahụike ma ọ ga - anwụ ngwa ngwa ”. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya ndị inyom na-enweghị di na ụmụ na-enwe obi ụtọ karịa ndị ọzọ.
Be l ụ di na nwunye, ee, ma obughi ihe ọ bụla
Ọ bụrụ na nyocha nke mmekọrịta ọha na eze a bụ enweghị nchekwube, na nwa agbọghọ na-alụbeghị nwanyị nke chọrọ izute onye ziri ezi ma mụọ ụmụ anaghị etisa. Naanị, ịmalite ozi dịka mmadụ ga-alụ ma mụọ nwa iji nwee obi ụtọ bụ nsị. Na ezi ihe kpatara ya, iji ọsọ ọsọ ịchọta onye mkpụrụ obi kpuru ìsì. Na ezi ihe kpatara ya, enwere ike imezu mmezu mgbe anyị zutere onye ziri ezi, onye na-enyere anyị aka inwe obi ụtọ ọ bụghị onye na-agbanwe anyị. Anyị na-adọta ihe dị ka anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịlụ di na nwunye ruo mgbe anyị na-echeghị echiche, e nwere ihe ize ndụ dị n’inye ụmụaka ịgba alụkwaghịm. Alụmdi na nwunye abụghị naanị ajụjụ nke mmetụta uche, kamakwa ụkpụrụ ndị ị ga-amata na ha ga-eme ka njikọ gị dịrị.
Beingbụ nne nanị ya na-azụ ụmụ kwere omume!
Nanị ibi bụ ihe a na-apụghị izere ezere mgbe ịchọrọ ịmụ nwa. Womenmụ nwanyị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye nọ na mmekọrịta nwere ọtụtụ teknụzụ ịtụrụ ime n'onwe ha, ọbụlagodi mgbe ha dị afọ. Fọdụ anaghị ala azụ ịgafe akwụkwọ ma ọ bụ jiri nkuchi mee ihe iji mezuo ọchịchọ a. Agbanyeghị, nke ikpeazụ a ga-abụrịrị nke onwe n'ihi na iwebata ụwa bụ onyinye nke ịhụnanya kamakwa usoro nke ịchụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na nwanyị ahụbeghị nwoke nwere obi eziokwu n'ụzọ ya, ọ nwere ike igbaze oocytes ya ma ọ bụrụ na nhọrọ nke ịmụ nwa bụ nkwenye siri ike. Bụ nne abụghị ntinye nke ndụ nwanyị, ndị ọzọ na-achọta obi ụtọ ha site n'ilekwasị anya na ọrụ ha, mmekọrịta ha ma ọ bụ nnwere onwe ha. Ndị ọzọ adịghị eche na ha dị njikere ma ọ bụ na-achọ ịnwe ya ma nke ahụ abụghị ụta. Ndị na-eme ụdị ndụ a na-enwe obi ụtọ dịka ndị kpebiri ịbụ nne.
Absolutely ga-enwerịrị mmekọrịta?
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụmụ nwanyị na-achọ izute ezi ịhụnanya nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị ọzọ anaghị enwe obi ụtọ inwe ụbọchị mbụ, ịbanye na saịtị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ma ọ bụ inwe mmekọrịta siri ike. Ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye chọrọ izute ọtụtụ mmadụ ma nwee njikọ na-enweghị njikọ. Enweghị mmasị ịchọta onye ziri ezi apụtaghị na ndụ kwesịrị ịbụ ihe niile gbasara nkụda mmụọ. Ndụ ejiri akara site na mkpali ọgụgụ isi, njem na mkparịta ụka na-atọ ụtọ nke anaghị ebute ịchọta pearl dị ụkọ. Nke a apụtaghị na, na nwanyị na-alụbeghị di enweghị ike inwe ọdịnihu na-enye ọ excitingụ. Gingghọ enyi na enyi na enyi bụ ihe na-eme ka ndụ dị ụtọ!
Ihe na-eme ka ice cubes mee ngwa ngwa - SANTE PLUS PL
Nke a bụ otu esi ewepu mmịrị mmịrị dị mfe - AHUIKE…
Kedu ihe kpatara eji asọ nwanyị na-alụbeghị di anya?
Ajụjụ site Psychologies, Marie-Hélène Brousse, psychoanalyst, na-achị ọchị n'ajụjụ: "Olee otu esi abụ nwanyị nwere onwe?" ". Ọkachamara ahụ kọwara na nnwere onwe adịghị ma na anyị na-agbasochikwu okwu na-anyịgbu anyị nakwa na osisi dị mkpa maka mmekọ nwanyị. Ọkachamara nke psychè na-akọwa na ruo ogologo oge, nwanyị ahụ na-ewere ọnọdụ abụọ: nke ihe nke mgbanwe na nke isiokwu, nke na-egosi ya ọrụ dị na ntọala nke ezinụlọ. “Menfọdụ ụmụ nwoke na-ahụkwa ya mgbe ha ghọrọ ohu. Maka ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ na mbara ala a, nke a ka bụ iwu, "ka ọ kwara n'arịrị. N'agbanyeghị afọ ole na ole ịgba mbọ iji nweta nnwere onwe site na ọha mmadụ na-achịkwa nwoke, enwere ike fọdụrụnụ n'etiti ụmụ nwanyị ibi ndụ na usoro ha na-enweghị ikpe ma ọ bụ iwe. O siri ike ịhapụ usoro nna ochie na-amaghị ihe ọbụlagodi ma ọ bụrụ na mmadụ echee na ọ ga-achọ nke ọzọ. "" Okwu nna ukwu ahụ na - eweta mmekọrịta nke ịchị na ụdị ọ ofụ nke, n'ihe metụtara ụmụ nwanyị, na - atụgharịrị n'ụzọ siri ike site "Kechie ya elu ma mụọ nwa" »Ọ na-emesi ike. Ọkachamara n'ihe gbasara mmụọ bụ Anasthasia Blanché na-agbakwụnye na ụmụ nwanyị na-agbagha ọchịchọ ha n'ihi na ọtụtụ ụjọ anaghị atụ ha ụjọ: nke ịghara ịbụ ndị ziri ezi, n'ọnọdụ ha ma ọ bụ ruo ya na ikpe ọmụma nke anọghị na onye òtù ọlụlụ na ụmụaka. Na ezigbo ebumnuche, ọtụtụ iwu nyere ụmụ nwanyị nsogbu na nke a dabere na nguzozi n'etiti ọkachamara, mmekọrịta alụmdi na nwunye na ndụ nne na nna, iwu nke na-erughị ndụ ụmụ nwoke na-adị kwa ụbọchị. Ibu ọrụ a nke iche echiche banyere ihe niile dị njọ maka ahụike uche. Uche echiche a na-emetụta ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye bụ ndị a na-echetara mgbe nile banyere "ọdịda" a na okwu ikpe mara banyere mmekọrịta ịhụnanya. Ibghara ịlụ di ma ọ bụ nwunye ka a hụrụ dị ka ihe a ga-edozi ma tinyekwara obi amamikpe a, ọ nwere ike ibute iche. Inweta ihunanya nke otu nwoke n’agbanyeghi ihe o bula nwere ike buru oke ihe ojoo nke ihere a nke puru imebi ndu anyi niile.
Uche ibu - Isi mmalite: France Inter
"Ọchịchị aka ike nke superego"
Fatma Bouvet de la Maisonneuve, onye isi mgbaka, na-eduga n'ihe na-eme ka ụmụ agbọghọ na ndị nwanyị toro eto na-agbaso ụzọ a kụrụ akụ dị ka nke dị mkpa iji mee nzukọ siri ike, ịlụ di na ịmụ ụmụ. "Ọtụtụ na-ekwupụta enweghị ntụkwasị obi onwe onye nke na-emegide nnabata ọrụ ndị ha nwere ike ịnakwere" na-enyocha dọkịta ahụ. O kwukwara na ihe ịma aka ndị ha na-eche agaghị ekwe omume n ’ihi na e jiri ha tụnyere nke nwoke. “Nke a bụ ihe ha na-agaghị edili karị dịka ha onwe ha maara ezigbo ọchịchị aka ike nke superego: ha debere ogwe dị oke elu ma nwee mmetụta siri ike nke ọrụ nke na-akpali ha ka ha bụrụ ezigbo ndị agha, iji mee ka mkpa nke ha ghara ịda mbà ”ka ọkachamara ahụ kwuru. Ọ bụghị naanị nchịkwa nwoke na-eme ka ụmụ nwanyị gbadata ọrụ a n'ihe gbasara ihe a tụrụ anya n'aka ya. Mee 68 na ihe gbasara nwanyi ya butere akụkọ ifo nke na-agbakwunye ụmụ nwanyị taa. Ebumnuche ndị a ga-arụzu? Bebụ nwanyị na-arụpụta ọrụ, nwee ahụ zuru oke, onye nyere iwu na onye ọ bụ ịbụ ezigbo nne. Pedestals nke, kama ịtọhapụ ya, na-agbakwunye ihe a tụrụ anya n'aka ya tupu nnwere onwe inwe mmekọahụ: nke ịbụ nwanyị nwe ụlọ, nne na ezigbo nwunye. Ọ bụrụ na ndụ di na nwunye adịzịzi edozi, a na-atụ anya ihe ndị ọzọ n’aka ụmụ nwanyị na nlekọta ezinụlọ dịka ịhazi na ịhazi ihe niile metụtara njikwa ụlọ ahụ. Egwu nke, site n’ụbọchị ruo n’ụbọchị, nwere ike ibute ọkụ na-agba nne, ọrịa ike ọgwụgwụ n’ihi ibu ọrụ niile dịịrị nne.
Uche uche maka ụmụ nwanyị - Isi mmalite: Maka ha
Kedu ka esi agbaji?
N’iburu “ibu ọrụ” nile ndị na-anyịgbu nwanyị, nke inwe mmekọrịta ịhụnanya, nke inwe ezigbo ụgwọ ọrụ na nke na-akwụghachi ụgwọ, inwe ihe ịga nke ọma n’iwulite mmekọrịta na-adịgide adịgide, ànyị kwesịrị ịsị “kwụsị”? Nke a bụ ihe Fatma Bouvet de la Maisonneuve na-atụ aro. ". Hapụ ha ka ha kwụsị ịdị na-ada mba, na-arịọ mgbaghara maka ịbụ ndị ha bụ, na ọdịdị ha, bayoloji ha, ụdị onye ha bụ, na ihe ka mkpa ha ”ka ọkachamara ahụ na-ekwusi ike. Nke a metụtakwara ụjọ ịghara inwe mmekọrịta mmekọrịta, ọbụlagodi na 40 afọ. Na-eche ịchọta ezi ịhụnanya iji nwee ike ịghọta onwe gị site na echiche ụwa niile na-agbakwunye iduga ụmụ nwanyị. Onye na-agwọ ọrịa uche na-atụ aro ndị na-enweghị enyemaka n'ihu ọtụtụ isi ka ha lelee na ndụ ha "Inyocha ihe na-akpali ha ikwenye na ọ gaghị abụ n'ụzọ ọzọ". Maka psychoanalyst Anasthasia Blanché, ụzọ kachasị mma iji mee nke a bụ ịchọta isi mmalite nke mmụọ nsọ yana ụmụ nwanyị ndị ị na-achọghị ịdị ka. Onye ọkachamara ahụ na-adụkwa ọdụ maka nke a, iji nyochaa mmekọrịta ya na nne iji merie ihe niile na-egbochi anyị na ndụ. “Cannot gaghị enwetali nnwere onwe gị ma ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ banyere mmekọrịta gị na nne gị, nke ị gaara enwe, na karịsịa nke ị gaara achọ inweta. N'ihi na inwere onwe gị pụtakwara ịtọhapụ onwe ya na "adịghị m mma" na anya nne, na site na nsonaazụ nke ikpe a na mmekọrịta anyị, ụzọ anyị si bụrụ nne, mmekọrịta anyị na-arụ ọrụ, na ndụ. , ara, ”ka ọ na-agbakwụnye.
"Tụgharịa uche n'ihe mejupụtara ndụ"
Dị ka ị ga-achọpụta, ndụ ihe ịga nke ọma na-adabere na iwu ndị na-emegiderịta onwe ha dịka ha na-agaghị ekwe omume. Beingbụ nwanyị nwanyị na ezigbo nne, nwanyị rụzuru ọrụ ma na-eji ụlọ aka ya arụ ụlọ ya, na-enwe ahụ nrọ mgbe ọ na-adị akọ bụ ozi niile nke usoro mgbasa ozi na ihe niile anyị na-eme kwa ụbọchị. Anyị enwere ike ịnweta ya niile? Ee, ka Fatma Bouvet de la Maisonneuve na-ekwu, nke na-enye ọnọdụ. "Womenmụ nwanyị nwere ike ịchọta ụzọ site n'ịgbalị 'ịtụgharị uche n'ihe bụ ihe ịga nke ọma na ndụ. dika ọchichọ nke ha si di »Na-ekwenye na onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ nke na-atụ aro ka ha lekwasị anya n'ihe ndị kacha mkpa ya n'emeghị ka ha nwee ikpe ọmụma. N'ihi na site n'ịchụ onwe anyị n'àjà, anyị na-emerụ ndị anyị hụrụ n'anya obi na-adịghị mma n'ihi na anyị amaghị na anyị chọrọ ka ha gbochie anyị. Maka ọkachamara ahụ, ịbụ nne na-agbanwe ndụ nwanyị na ebumnuche ya kpamkpam. Nwanyị nwere ụmụ, ọ bụghịzi otu ihe ahụ. Na nchegbu nke ya agbakwunyere nchegbu ọ nwere maka ha. Anaghị m ebelata nwanyị ịbụ nne. Mana ịmụ nwa ekwesịghị ịbụ ihe nkwarụ n'ịchụso ọrụ ha, ”ka ọ na-agbakwụnye.
Amaja onwe gi
Igosiputa onwe ya “nke onwe” site na icheghari uche n’ihe neme ka ayi buru ihe di nkpa kari ichuche odi nma rue obula. Fatma Bouvet de la Maisonneuve na-ekwu, "Onye ọ bụla nwere ike ịchọta obere oghere na ndụ ya ịgakwuru nwanyị ọ ga-achọ ịbụ." Inye onwe gi onwe gi bu njem nke gbadoro obi oma, ndidi na nchekwube. Na 40, ọ ga-ekwe omume inwekwu obi ike na nhọrọ gị ekele ntozu oke na-esite na ahụmịhe. Ikewapụ onwe gị n'ihe a tụrụ anya n'aka anyị na anya ndị ọzọ bụ ihe mbụ ị ga - eme iji nwee ahụike. Ọ bụrụ na ị “tara ahụhụ” nhọrọ ịnọrọ onwe gị, ọ nweghị afọ nwere ike ịgba oke maka ịhụta onwe gị na ndị ọzọ n'anya. O nwekwara ike ikwere na nrọ gị nke kachasị njọ site n'ime ihe n'emeghị ka ịchọta ịhụnanya. N'ikwu eziokwu, ige ntị na obi gị na ihe na-eme anyị jijiji bụ ụlọ akwụkwọ mara mma nke ga-eme ka anyị mụta kwa ụbọchị gbasara onwe anyị na ọchịchọ anyị. N'ihi na ọ bụrụ na inwe ọnọdụ ọkachamara na-aga nke ọma na-akwụghachi ụgwọ, obi ụtọ na-amalite n'ime onwe ya ma bụrụ nke a na-adịghị ahụ anya.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/est-il-normal-quune-femme-de-40-ans-soit-celibataire-et-sans-enfants/
Mgbe Indian Airtel nwetaghachiri uto maka Africa - Jeune Afrique
Ihe mgbaàmà mbụ ị ga-enwe na mmalite nke oge ịhụ nsọ nwoke - SANTE PLUS…